အရောင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ငန်းများမေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်း အချိုု့ရှိပါတယ်။ | မာသင်
အရောင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ငန်းများမေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်း အချိုု့ရှိပါတယ်။
အရောင်းတွေ တိုးတက်လာအောင် အရောင်းသမား ထပ်တိုးခန့်ထားရမလား ?
လက်ရှိမှာ ခန့်ထားတဲ့ အရောင်းသမားအရေအတွက် များနေပြီလား၊ နည်းနေသေးလား ?
အရောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်အားကို ဘယ်လိုတိုင်းတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မလဲ ?
အထက်ပါ မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေက RPS လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွင်းတိုင်းတာရတဲ့ နံပါတ်လေး တစ်လုံးမှာ မူတည်နေပါတယ်။
RPS ဆိုတာ Revenue Per Sale-man ရဲ့အတိုကောက်ပါ။
အရောင်းသမားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ ပမာဏကို တွက်ချက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနံပါတ်ကို သိတာနဲ့ အထက်ပါ မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကို သိပါမယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ဒီနံပါတ်ကို တွက်ကြည့်ပြီး သိပြီဆိုရင် အထက်ပါမေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
RPS ကို ဘယ်လိုတွက်သလဲ ဆိုရင် ……
RPS = Revenue from Sale / number of Sale force
Revenue from sale ( အရောင်းသီးသန့်ဝင်ငွေ ) ကို ပိုင်းဝေမှာ တည်ပြီး Number of Sale force ( အရောင်းဝန်ထမ်းဦးရေ) နဲ့စားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရလာတဲ့ အဖြေသည်…… အရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ပျမ်းမျှရှာပေးတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်က… ပျှမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။ ( တစ်ဦးချင်းအတိအကျမဟုတ်ပါ)
ရည်ရွယ်ချက်က နှိုင်းယှဉ်အကျိုးကို လိုချင်လို ပျှမ်းမျှကို ရှာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်း (၂) သွယ်
ရလာတဲ့ RPS နံပါတ်ကို နည်းလမ်း (၂) ခု အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့RPS နဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
(ဥပမာ…လုပ်ငန်းတူ စီးပွားရေး တစ်ခုက RPS က များနေတယ် ဆိုပါတော့ ..လုပ်ငန်းလဲတူတယ်၊ လုပ်ရတာချင်းလဲတူရဲ့သားနဲ့ ကိုယ့် RPS က ဘာလို့နည်းနေရတာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
(၂) ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အတိတ်က RPS နဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
(ဥပမာ..အရင်က ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို သိန်း၁၀၀ လောက်ရှာပေးတယ်၊ အခု ဘာဖြစ်လို့၅၀ ပဲ ရှာနိုင်ရတော့တာလဲ ဆိုတဲ့စီစစ်တဲ့ မေးခွန်းကို မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
တွက်ရတာ လွယ်ကူပြီး၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အရောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့Productive ဖြစ်မှုကို အလွယ်တကူ တိုင်းတာနိုင်တဲ့ Productive KPI တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နံပါတ် တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း ….မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။